အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုပလပ်စတစ်စက်ယန္တရား China Manufacturer
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်:Precision ကုန်ပစ္စည်းများမှို,ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များ,ပတ်ဝန်းကျင်-ဖော်ရွေပစ္စည်းထုတ်ကုန်များ
Home > ထုတ်ကုန်များ > မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း > မြင့်မားသော Precision မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း > အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုပလပ်စတစ်စက်ယန္တရား
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့သတ္တုစိုင်းကွယ်လွန်, ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးမှို, မော်တာ stator & ရဟတ်မှိုနှင့်နေမှုကိုချေဖျက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆေးထိုးအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်အထူးပြုနှင့်အမျိုးမျိုးသောမှို၏ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်သေဆုံးသည်။ ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသောမှိုများကို & ဒါပေါ်တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံ, စပိန်, အီတလီ, ရုရှားနှင့်ထံမှဖောက်သည်သေသွားတယ်။ ပစ္စည်းကိရိယာအရည်အသွေးကိုအရည်အသွေးအများအတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံ, ထိုပစ္စည်းကိရိယာများသက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်အသွင်ပြောင်းထွက်သယ်ဆောင်ရန်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသက်ဆိုင်ရာရန်ပုံငွေအတွက်တတ်၏စက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်စောင့်ရှောက်ခြင်း, အစဉ်အလာထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများမှကပ်ဘဲ, အစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုတိုးတက်စေရန်အလယ်မှာနဲ့ high-end ထုတ်ကုန်ဈေးကွက်ကိုပစ်မှတ်ထား , ဒါကြောင့်စက်ရုံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်စျေးကွက်ဝယ်လိုအားလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိကို ပို. ပို. ခိုင်ခံ့စေ၏လိမ့်မည်။ ဖောက်သည်အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပုံသဏ္ဍာန်, ဒီဇိုင်းနှင့်အရွယ်အစား Professional ကထုတ်လုပ်သူ / ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်သည်။
။ ငါကဘယ်လိုထုတ်ကုန်များအတွက် quotation အများနှင့်တုန့်ပြန်ချက်ရနိုင်မလဲ?
.How ရှည်လျားငါ quotation အရနိုင်မလဲ?
ရှည်လျားသော .How သင်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ရန်ကြမည်နည်း
extrusion မှိုများအတွက် 2-3wks
custom Injection ကိုပလတ်စတစ်မှိုပလတ်စတစ် Injection ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို
ပလပ်စတစ် Insert မှိုပြုလုပ်ခြင်းပလပ်စတစ် Injection ကိုမှို
စိတ်ကြိုက်အမြင့် Precision အဘို့ကိုနှစ်ချက်အရောင်ပလတ်စတစ်မှို
ကို ABS ပစ္စည်းများ Injection ကိုမှို
မူပိုင်ခွင့်© 2020 Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. All rights reserved ။ မှပံ့ပိုးသည်